Raha te-hanangona angon-drakitra tao amin'ny vanim-potoana nomerika, mila mahatsapa fa ianao mifaninana ho an'ny olona ny fotoana sy ny tsara. Tamin'ity indray mitoraka ity sy ny tsara dia mampino sarobidy ho anao; dia ny akora ny fikarohana. Maro ny mpahay siansa ara-tsosialy efa zatra nanaovany fikarohana ho somary babo mponina, toy ny ao amin'ny fonenan'ny mpianatra undergraduates Labs. Amin'ny toe-javatra ireo, ny zavatra ilain'ny hanjaka ny mpikaroka, ary ny fifaliana ny mpandray anjara dia tsy laharam-pahamehana voalohany. Amin'ny vanim-potoana nomerika fikarohana ity dia tsy fomba maharitra. Mpandray anjara matetika amin'ny mpikaroka ara-batana lavitra sy ny fifandraisana eo amin'ny roa dia matetika natao tamin'ny alalan'i ny solosaina. Ity faritra Midika izany fa ny mpikaroka no mifaninana ho an'ny mpandray anjara ny saina, ary noho izany dia tsy maintsy mamorona ny mpandray anjara mahafinaritra kokoa ny traikefa. Izany no antony isaky ny toko ny tsaho momba fifandrindrana amin'ireo mpandray anjara, dia nahita ohatra ny fampianarana izay naka ny mpandray anjara-mifantoka fomba fanangonana antontan'isa.
Ohatra, tao amin'ny Toko faha 3, dia nahita ny fomba Sharad Goel, Winter Mason, ary Duncan Watts (2010) Namorona ny lalao antsoina hoe Friendsense izay raha ny marina dia feno hafetsena toetsika manodidina ny toe-tsaina fanadihadiana. Tao amin'ny Toko faha 4, izahay nahita ny fomba dia afaka mamorona aotra miova vola tahirin-kevitra amin'ny alalan'ny nanaovany fanandramana fa ny olona tena te-ho any, toy ny mozika downloading andrana izay namorona niaraka tamin'i Petera Dodds sy Duncan Watts (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Farany, tao amin'ny Toko faha 5, dia nahita ny fomba Zoo Galaxy namorona faobe fiaraha-miasa izay nahatonga mihoatra ny 100.000 ny olona mba handray anjara amin'ny iray Momba ny Kintana (in roa saina ny teny) sary fametahaka marika asa (Lintott et al. 2011) . Ao amin'ny tsirairay avy ireo toe-javatra, mpikaroka nifantoka tamin'ny famoronana traikefa tsara ho an'ny mpandray anjara, ary isaky ny tranga, io fomba fijery mifantoka mpandray anjara-afaka karazana fikarohana vaovao.
I antenaina amin'ny hoavy, mpikaroka dia mbola hanana ny fomba fanangonana antontan'isa izay miezaka ny hanangana mpampiasa tsara traikefa. Tadidio fa eo amin'ny taona nomerika, ny mpandray anjara dia iray tsindry lavitra lahatsary iray Skateboarding alika.